नेपालमा फेरी भूकम्पको शक्तिशाली धक्का, मान्छेहरूको भागाभाग, कहाँ हो केन्द्रबिन्दु ? — Imandarmedia.com
नेपालमा फेरी भूकम्पको शक्तिशाली धक्का, मान्छेहरूको भागाभाग, कहाँ हो केन्द्रबिन्दु ?
काठमाडौँ । देश कोरोनाको चपेटमा परेका बेला नेपालमा लगातार भूकम्पको धक्का जाने क्रम जारी छ । केहिदिन अघि काठमाडाैं र २ दिनघे मात्रै सुदुरपश्चिम हल्लाएको भूकम्पले फेरी आज बिहान संखुवासभामा हल्लाएको छ।
राष्ट्रिय भूकम्पमापन केन्द्रले जनाए अनुसार बिहान ७ः२० बजे ४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो । भूकम्पले एक्कासी हलाएपछि मान्छेहरुको भागाभाग भएको थियो । संखुवासभाको मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज, ताम्कु र पाथिभरा आसपास केन्द्रबिन्दू भएर भूकम्प गएको केन्द्रले जनाएको छ । भूकम्पको झड्का छिमेकी जिल्लाहरुमा समेत महसुस गरिएको बताइएको छ ।
भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार यसअघि बझाङ केन्द्र बनाएर गत भदौ ९ गते ४.७ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । यस्तै बुधबार रातिको बाढी र पहिरोले बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–९ बोबाङमा मृत्यु भएका १४ मध्ये चार जनाको शव सनाखत भएको छ ।
उनीहरुको शव बुर्तिबाङस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा राखिएको छ । पहिचान भएकाहरुको पोष्टमार्टमको काम आज हुने छ । घटनामा बेपत्ताको आज बिहानैदेखि खोजी शुरु भएको रेग्मीले बताए । रातको समयमा खसेको पहिरोमा परि धेरैले ज्यान बचाउन नसकेका हुन् । केही मानिसले भागेर ज्यान बचाएका थिए भने कतिलाई भाग्ने क्रममै खोलाले बगाएको थियो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका ९ को बोबाङमा गएको पहिरोको अवस्था बुझ्न त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । हिजै घटनास्थल गएका थापासहितको टोली खराब मौसमका कारण फर्किएको थियो ।
आज सांसद देवेन्द्र पौडेलसहित उद्धार टोलीसहित मन्त्री थापा त्यसतर्फ गएका हुन् । बुधबार रातिको बाढी र पहिरोले बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–९ बोबाङमा मृत्यु भएका १४ मध्ये चार जनाको शव सनाखत भएको छ ।
यस्तै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले शुक्रबारको मौसम पूर्वानुमान सार्वजनिक गरेको छ । महाशाखाका अनुसार हाल मनसुनको न्युन चापीय रेखा नेपालभन्दा केहि पर दक्षिणतर्फ अवस्थित छ ।
महाशाखाले हाल देशको पहाडी भूभागमा सामान्य बदली र तराई भूभागमा आशिंक बदली रहेको जनाएको छ । महाशाखाले शुक्रबार दिउँसो देशभर सामान्यतया बदली रहि केहि स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको पूर्वानुमान गरेको छ ।
यसैगरी, देशभर सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरुमा मेघगर्जन, चट्याङ्ग सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै प्रदेश १ तथा गण्डकी प्रदेशका एक वा दुई स्थानहरुमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।